Fahadisoana 10 lehibe indrindra ataon'ny orinasa Marijuana sy CBD amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana
Fahadisoana 10 lehibe indrindra ao amin'ny tranokalan'izy ireo no manao izany.
Marijuana fialamboly 10 be indrindra…
Tsy manome antoka fa sariaka finday ity tranonkala ity
Manakaiky ny 75 isan-jaton'ny mpikaroka amin'ny Internet no atao amin'ny alàlan'ny fitaovana finday. Tena marina kokoa izany ho an'ireo orinasa manana adiresy ara-batana satria amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia mandehandeha ireo mpanjifa mety ho avy ireo. Google dia nanomboka an'ity fanovana ity tamin'ny 2014 rehefa nahatsikaritra izy fa ny fikarohana finday dia nahitana fikarohana momba ny birao voalohany. Google dia tena hanao izany miteraka fatiantoka ho ny tranokalanao raha tsy sariaka finday. Azonao atao ny manandrana ny tranonkalanao izao amin'ny alàlan'ny rohy malalaky ny finday an'i Google Eto: https://search.google.com/test/mobile-friendly
Tsy manana ny menio momba ny vokatra fampiantranoana ao amin'ny tranonkalany.
Ny ankamaroan'ny dispensaries Marijuana Recreational dia manana ny menus fampiantranoana azy ireo amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo toa an'i Leafly na Weed-Maps. Fahadisoana lehibe noho ireto antony manaraka ireto:
A. Ny motera fikarohana Google dia aleony tranonkala manavao ny atiny matetika. Arakaraky ny fanavaozana ny tranokala matetika no mazàna ny tranokalan'i Google no manisa.
B.Mpanjaka ny atiny, ny tranonkala manana atiny maro kokoa dia hitombo isa ambony noho ireo izay kely kokoa.
C. Ny bounce rate avo loatra. Ny tahan'ny fihenam-bidy dia teny SEO izay mamaritra ny halavan'ny fotoana hijanonan'ny mpampiasa eo amin'ny tranonkalanao. Raha marijuana Google ianao ary mitondra anao amin'ny tranokala mivarotra kojakoja amin'ny fiara dia tsindrio avy hatrany ary manohy ny fikarohana. Google dia mijery ity metrika ity ho famantarana fa ny tranokalanao dia spammy na ambany kalitao. Ny olona mahita ny fampahalalana tadiaviny dia mijanona ao amin'ny tranonkala lava kokoa ary mamaky ny vaovao.
D.Raha tsy eo amin'ny tranokalano ny mpanjifanao izay mitady vokatra manokana dia mankany amin'ireo mpifaninana aminao fa tsy. Ity misy ohatra iray,
Mpikaroka mpampiasa Blue Dream in Tacoma ireto ny valiny.
Ireo orinasa marihuana izay tsy manana menio ao amin'ny tranonkalany no hanao izany TSY misehoa amin'ireto mpikaroka ao an-toerana ireto.
Tsy manao fikarohana Keyword alohan'ny fananganana ilay tranonkala.
Raha tsy manao fikarohana teny lakile ianao izay ny fizotran'ny fampiasana fitaovana sasany hamaritana izay teny fanalahidy tadiavin'ny olona betsaka indrindra dia hahazo fifamoivoizana sy fivarotana kely kokoa noho ireo mpifaninana aminao ianao. Fomba tsotra hanaovana fikarohana teny fototra ny fanoratana ny teny kendrenao ao amin'ny Google. The fiara tanteraka ny tolo-kevitra dia famantarana tsara amin'ny karazana teny ampiasain'ny mpanjifa hahitanao ny vokatrao na serivisinao. Raha tsy misy ireto teny fanalahidy ireto ao amin'ny lohateny ny Meta, ny famaritana Meta sy ny vatan'ny pejin-tranonkalanao dia tsy tratry ny mpanjifa marobe ianao.
Tsy manana bilaogy.
Ireto ny tanjon'ny bilaoginao:
A. Manampy atiny ao amin'ny tranonkalanao izy io. Azonao atao ny manampy famerenana vokatra, tantara, hetsika ary maro hafa.
B. Izy io dia mitazona ny tranokalanao havaozina amin'ny atiny vaovao izay hanome anao laharana ambony.
C. Hisambotra teny lakile rambo lava ianao izay 75 isan-jaton'ny karoka rehetra. Ny teny lakile fohy dia mety ho toy ny “dispensaries akaiky ahy” ny teny lakore lava dia ny hoe “Inona no dispensary marijuana fialamboly tsara indrindra any Seattle”. Aza adino koa fa ny 25 isan-jaton'ny fikarohana isan'andro dia ireo izay mbola tsy hitan'ny Google talohan'izay. Amin'ny fampidirana bilaogy sy hitazomana izany amin'ny alàlan'ny atiny lehibe dia hisambotra bebe kokoa amin'ireo mpanjifa ianao.
Vital X Dispensary anaty trano / fakan-tsary WIFI fakan-tsary
199.99 amidy amidy 119.00
Tsy manatsara ny lisitry ny orinasanao Google sy ny pejy Google-Plus.
Google dia manandrana mifaninana amin'ireo tranonkala sosialy sy dinika hafa toy ny Face book sy Yelp. Amin'ny famitana ny lisitry ny orinasanao Google sy ny fampidirana sary mifandraika amin'izany Google dia azo inoana fa handray ny asanao ho zava-dehibe ary hanao lisitra avo kokoa. Ary amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny pejinao Google plus sy famporisihana ny mpanjifanao hanaraka ny pejinao. Hiseho eo amin'ny valin'ny fikarohana azy ireo ny lahatsoratrao.
Tsy marketing amin'ny alàlan'ny You-Tube
Google no motera fikarohana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ny tsy tsapan'ny ankamaroan'ny olona dia You-Tube no motera fikarohana faharoa lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Ary maminavina inona? Google manana You-Tube. Tian'i Google ny horonantsaryYou-Tube satria afaka mivarotra dokambarotra izy ireo isaky ny mijery azy ireo ny mpampiasa. Noho izany dia misy dikany ny fananana Channel You-Tube ho an'ny orinasanao ary handefa horonantsary manan-katao manan-danja mifandraika amin'ny orinasanao.
Tsy manangona mailaka an'ny mpanjifa
Ny tranokalanao hatramin'ny andro voalohany dia tokony hanana fizarana ahafahan'ny mpanjifa mamela ny anarany sy ny adiresy mailaka hanatevin-daharana ny lisitry ny mailakao. Azonao atao ny mampiasa an'ity mailing list ity hanambarana hetsika, fihenam-bidy ary fifaninanana hahazoana denaria amin'ny dolara.
Tsy mitaky mpivarotra hifandray amin'ny tranokalanao.
Iray amin'ireo fomba manan-danja indrindra mamaritra ny Google ny tanjaky ny tranokala iray ny amin'ny habetsaky ny tranonkala hafa manondro rohy miverina aminao. Manisa izany ho toy ny latsa-bato amin'ny Internet fa ny tranonkalanao dia orinasa tena misy ary misy atiny tsara. Na izany aza tsy mitovy ny rohy rehetra; mila rohy avy amin'ny tranokala izay eo amin'ny sehatry ny asa misy anao ianao. Firy amin'ireo mpivarotra anao no manana tranokala? Asaivo manondro rohy mankany amin'ny anao izy rehetra avy eo. Hanampy izany ROA mitana ny varotra mitombo avo kokoa ho anao roa ny orinasa.
Ny tsy fananan'ny mpiasa miditra amin'ny votoatiny sy ny fizarana sosialy.
Firy amin'ny mpiasanao no manana kaonty Face-book, twitter na Google? Mametraka sy mizara ny bilaoginao ve izy ireo? Mametraka hevitra ao amin'ny tranonkalanao ve izy ireo? Mamorona atiny sy soratra manokana momba ny orinasanao ve izy ireo? Raha tsy izany dia tokony ho izy ireo. Arakaraka ny maha-be ny fizarana ara-tsosialy ny orinasanao no avo lenta ny tranonkalanao. Miankina amin'ny fahombiazanao ny fahombiazan'izy ireo.
Vakio ny mpitari-dalana anay Fomba 8 ahafahan'ny mpiasa manampy amin'ny fanatsarana ny fanatsarana ny motera fikarohana.
Tsy mamaly ny hevitra ao amin'ny Google anao.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Brightlocal Ny 88% -n'ny mpanjifa dia matoky ny tsikera an-tserasera toy ny tolo-kevitra manokana — izay mahatalanjona rehefa mijery ny zava-misy fa ny tsikera dia avoakan'ny olona tsy fantany. Ilay fanadihadiana nataon'ny Brightlocal ihany; dia nanapa-kevitra fa ny 12% amin'ny mponina ihany no tsy namaky matetika ny famerenana ny serivisy na vokatra momba ny orinasa. Ny ankamaroan'ny tompona orinasa dia tsy mahalala akory fa afaka mamaly ny heviny izy ireo ary tombony ho anao izany raha ampiasainao tsara. Google dia manentana ny tompona orinasa hamaly ny hevitra tsara ary ny fanamarihana ratsy indrindra aza. Mampiseho an'i Google sy ny Mpanjifa fa miahy ny lazananao amin'ny Internet ianao. Google dia mijery izany ihany koa ho toy ny famantarana fa ara-dalàna ny orinasanao ary hampakatra anao ambony.
Mandehana eto raha hianatra ny fomba hamaliana ny Google Review. https://support.google.com/business/answer/3474050?hl=en
Ohatra amin'ny famaliana ny hevitry ny mpanjifa
Dispensary Search Engine optimization dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra azonao atao mba hampidirana mpanjifa bebe kokoa. Raha tsy eo amin'ny pejy voalohany an'ny Google ireo orinasa ireo dia mankany amin'ireo mpifaninana aminao ireo mpanjifa.
Isenselogic.com dia fananan'i David Meshach, injenieran'ny angon-drakitra Microsoft taloha ary tompona dispensary marijuana. Fantatray fa sarotra ny mifaninana amin'ny tsenan'ny marijuana fialamboly sy fitsaboana. Amin'ny alàlan'ny fiantohana fa tsy misy hadisoana ny tranokalanao ary manatsara ny fomba tsara dia hahazo mitsambikina amin'ny fifaninanana ianao.
Mifandraisa aminay anio ho an'ny a AUDIT SEO MAIMAIMPOANA ny tranonkalanao ankehitriny na hamaliana izay mety ho fanontanianao momba ny tranonkalanao.
Kitiho eto hamenoana ny taratasy fangatahana fifandraisana
Sokajy: BlogBy codecafe Jolay 3, 2017 3 Comments
Tags: Fanatsarana ny motera fikarohanaMarijuana SEO
PreviousPrevious post:Ohatrinona no takian'i Leafly & Weedmaps amin'ny doka amin'ny taona 2019?ManarakaNext post:Fomba 8 ahafahan'ny mpiasanao manampy ny orinasanao hahazo fidiram-bola bebe kokoa amin'ny alàlan'ny SEO
seo consult hoy:
Jolay 1, 2020 amin'ny 9: 06 am
Tiako ity lahatsoratra bilaogy ity! Nojereko tsara ny tranonkalanao
matetika ary koa mamoaka zavatra mahatsiravina tsy tapaka.
Nozaraiko tamin'ny Facebook izany ho an'ny dispensary rongony fialam-boly ary tiako ihany koa ireo mpankafy ahy
izany! Tazomy ny asa tsara 🙂
Jolay 2, 2020 amin'ny 2: 26 am
Fomba hahazoana vola avy amin'ny fampiasana dispensary marijuana fialam-boly amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny motera fikarohana
Rehefa afaka 30 andro monja dia mbola mila mikintona ny tenako aho hahazoana antoka fa tsy manonofy aho.
Nahazo dolara an'aliny dolara isam-bolana tamin'ny rindriko efatra nahafinaritra ahy aho.
Ny tombom-barotra dia mitombo sy mitombo ary mitombo!
Minitra vitsy monja
Amin'ny tsindry vitsivitsy monja dia afaka mamorona $ 15,000 isan'andro ianao mandritra ny androm-piainanao
Mampionona ny CBD ny tany hoy:
Aogositra 8, 2020 amin'ny 12: 11 pm
Lehibe lahatsoratra famolavolana tranonkala SEO sy SEO.
endrika mazavaPost comment